San Htun's Diary: လေ့လာခြင်း အနုပညာ...
အစ်မရေ နယူးယောက်ရောက်တော့ အင်္ဂလိပ်စာ ဘယ်လိုလေ့လာဖြစ်လဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေ ရေးပေးပါဦးနော်လို့အီးမေးလ်ပို့ လာတဲ့ ညီမခင်စန္ဒာထွန်းကြောင့် ဒီပို့ စ်လေး ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပို့ စ်ကတော့ ကိုယ် အင်္ဂလိပ်စာကို ဘယ်လိုလေ့လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ။ သင်ကြားပေးသူအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲ သင်ယူသူတစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့ အကြုံလေးတွေပါ။ အင်္ဂလိပ်စာကို ကိုယ်တို့ငယ်ငယ်ကတည်းက သင်ကြားခဲ့ရပေမဲ့ မပြောတတ်၊ မရေးတတ်တာ အင်္ဂလိပ်စာ ဘဝထဲကို မရောက်သေးလို့ ပါတဲ့။ မူလတန်းကနေ အထက်တန်းကျောင်းအထိက အင်္ဂလိပ်စာတွေ သင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ အများစုက ဂရန်မာ၊ ဝါကျ၊ အက်ဆေး ရေးတတ်အောင် သင်ရပါတယ်။ အပြောကတော့ အင်မတန် အားနည်းတယ် မပြောသလောက်ဘဲ။ ဂရန်မာကလည်း အရေးပါပါတယ် စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ ကလေးက I has လို့ ရေးတာတွေ့ ဖူးတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောပေမဲ့လည်း ဂရမ်မာ မကျေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ကိုယ် ပုသိမ် ထ၂ မှာ ၈ တန်းတက်တော့ အေတန်းက ကျောင်းသားတွေက အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်းကြတယ်။ မြန်မာ၊ သင်္ချာ၊ ပထဝီ၊ သမိုင်း၊ အီကို၊ ဓာတု၊ ရူပ၊ ဇီဝမှာ အမှတ်သိပ်မကွာပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်စာမှာ အမှတ်ကွာတယ်။ သူတို့ ထက် အင်္ဂလိပ်စာညံ့မှန်းသိတော့ အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်လာအောင် ဝါးရုံစာအုပ်ဆိုင်က ထွက်သမျှ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့ကျင့်ရေးစာအုပ်တွေ ဝယ်ပြီး ဂရန်မာတိုးတက်လာအောင် လေ့ကျင့်ရတယ်။ စပီကင်းစပြောဖြစ်တာတော့ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးခါစ လှည်းတန်းက ဆရာကြီးဦးမြကြိုင်ဆီမှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း တက်တော့မှပါ။ ဒါတောင် တပတ်၊ နှစ်ပတ်လောက်က Spare me လုပ်နေသေးတယ်။ ကိုယ့်အကြောင်း၊ မိသားစုအကြောင်း နည်းနည်းပါးပါးကို စာလိုက်မေးတဲ့ စီနီယာတွေနဲ့ပြောဖြစ်တယ်။ မသိတဲ့စကားလုံးကို စီနီယာတွေကိုမေး၊ မှားနေရင် သူတို့ က ပြင်ပေး၊ ကိုယ်မပြောတတ်တဲ့အခါ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ စာကြောင်းကို သူတို့ က အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပေး။
ဒီလိုနဲ့အပြောသွက်လာတော့ ပန်းခြံတွေ ဆောက်သင့်သလား၊ စာကြည့်တိုက် ဆောက်သင့်သလား ကိုယ့်အိုင်ဒီယာတွေကို ပြောဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးက မြန်မာတွေဆိုတော့ ဘိုသံတော့ ဘယ်ပေါက်ပါ့မလဲ။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ဂရန်မာမှန်မှန်နဲ့သူတပါး နားလည်အောင် ပြောနိုင်ရင်ပဲ အတော်ဟုတ်နေပါပြီ။ ဆရာကြီးဦးမြကြိုင်ကျောင်းမှာ စကားပြောတန်း၊ ဘာသာပြန်တန်း၊ စာဖတ်တန်း၊ ဂရန်မာတန်းတွေ တက်ခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေ နားထောင်တယ် အဲဒီတုန်းက ခေတ်စားတာ West Life ၊ Shania Twain ။ ရေဒီယိုကနေ ဘီဘီစီ အင်္ဂလိပ်ပ်ုိုင်းအစီအစဉ်တွေ နားထောင်တယ်။ စလောင်းကနေ စီအန်အေ Channel News Asia သတင်းတွေ နားထောင်တယ်။ စီအန်အေ သတင်းကြေငြာတဲ့သူတွေဟာ အမေရိကား၊ အင်္ဂလန်တို့ မှာ ထရိန်းခဲ့တော့ လေသံက အမေရိကန်လေသံပေမဲ့ အာရှဆိုတော့ အာရှလေသံက မပျောက်ဘူး ဒီတော့ ကိုယ် နားလည်တယ်။ စီအန်အန်သတင်းတွေဆို နားသိပ်မလည်ဘူး။ဘဝသစ်ဦးအောင်ကျော် တက်ဖူးတယ်။ ဆရာကြီးက အသက်ကြီး၊ လူတွေကလည်း တအားများတော့ ခဏပဲ တက်ဖြစ်တယ်။ တုိုဖယ်ဦးသိန်းဝင်းကိုတော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းပိတ်တုိုင်း တက်ဖြစ်တယ်။ တိုဖယ်ဖြေပြီး နိုင်ငံခြားကျောင်းတွေကိုလျှောက်ဖို့ ၊ တိုဖယ်အမှတ်ကောင်းရင် FullBright စကော်လာရှစ် လျှောက်ဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာကို ၃လအပြတ်ဆိုပြီး မရပါဘူး။ တသက်လုံး လေ့လာနေရမှာ။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးကတည်းက အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာခဲ့တာ အမေရိကန်ရောက်တော့လည်း စကားလုံးအသစ်တွေ၊ အသုံးအနှုန်း၊ ပြောဆိုတာတွေကို လေ့လာနေရတုန်းပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာတော့ အပြော အားနည်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အရေး၊ အဖတ်ကတော့ တိုးတက်အောင် လုပ်လို့ ရပါတယ်။
ကိုယ်အနှစ်သက်ဆုံးအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေကတော့ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရဲ့Colourful Myanmar နဲ့King Among Men စာအုပ်တွေပါ။ Colourful Myanmar စာအုပ်ကတော့ မြန်မာလူမျိုးတို့သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ နေထိုင်မှုဓလေ့စရိုက်၊ ဘာသာစကား၊ အနုပညာအကြောင်း အတော့်ကို စုံစုံလင်လင်နဲ့အင်မတန်ဖတ်လို့ ကောင်းတဲ့စာအုပ်ပါ။ ဆရာကြီးဦးမြကြိုင်က စာအုပ်အများကြီး ဖတ်စရာမလိုဘူး Colorful Myanmar စာအုပ်ကို ထောင်းလမောင်းကြေနိုင်ရင် အတော်ဟုတ်နေပြီတဲ့။ စာအုပ်ကို ထောင်းလမောင်းကြေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် အထဲကစာတွေကို ထောင်းလမောင်းကျေဖို့ ။ King Among Men ကတော့ ဆရာမကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးလက်ရာ masterpiece လို့ ပြောကြတယ်။ ၁၁ရာစုမှာ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အနော်ရထာမင်းက ကျန်စစ်သား၊ ငထွေးရူး၊ ငလုံးလက်ဖယ်၊ ညောင်ဦးဖီးတို့ နဲ့တွေ့ ဆုံခန်း။ ရာဇဝင်ထဲက သူရဲကောင်းလေးယောက်ဟာ စာအုပ်ထဲမှာ တကယ်လူသားတွေအဖြစ် ပီပီပြင်ပြင် အသက်ဝင်လို့ ၊ ဗျက်ဝိ ဗျတ္တ မယ်ဝဏ္ဏက ရွှေရောင်ရောင် အသားအရည်ရှိတဲ့ လူရိုင်းမလေး၊ ရှင်အရဟံနဲ့တွေ့ ဆုံခန်း၊ ဥသာပဲခူးနဲ့ခင်ဦး၊ ခင်ဦးနဲ့ကျန်စစ်သား၊ သုဝဏ္ဏဘူမိ သထုံပြည်ကနေ ဗုဒ္ဓသာသနာ တောင်းခံခန်း၊ ရေငန်သောက် မြက်ခြောက်စား ပုဂံသား အရိုင်းအစိုင်းတွေနဲ့တန်သလားဆိုပြီး သထုံက စစ်ကြေငြာခန်း၊ သထုံကို သိမ်းပိုက်ခန်းကို သမိုင်းပညာရှင်တွေနဲ့အသေအချာ တိုင်ပင်ပြီး ရေးထားတာတဲ့။ ကြက်မတဝပ်စာနေရာကိုသိမှ သထုံကို နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ တဘောင်၊ ရှမ်းမင်းသမီး စောမွန်လှနဲ့အနော်ရထာမင်းတို့ ရဲ့လွမ်းဆွတ်ဖွယ် ချစ်ဇာတ်လမ်း။ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ စာအုပ်တွေပါ ဖတ်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။ စာကောင်းပေကောင်း ဖတ်ရတဲ့အခါ Your article/ novel is so good လို့ပြောတာထက် I am so moved by reading your book လို့ပြောရတယ်လို့မှတ်သားဖူးပါတယ်။ အဲဒီလို so moved ဖြစ်သွားတဲ့ ဝထ္ထုတိုနှစ်ပုဒ် ရှိပါတယ်။ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရဲ့မူယာစုံလင် သူ့ ရုပ်သွင် Her Infinite Variety နဲ့Come, live with me ဝထ္ထုတွေပါ။
မူယာစုံလင် သူ့ ရုပ်သွင်ဟာ Horizon မဂ္ဂဇင်းက ကြီးမှုးကျင်းပတဲ့ အရှေ့ တောင်အာရှစာရေးဆရာများရဲ့ဝထ္ထုတိုပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရထားတဲ့ ဝထ္ထုပါ။ Intermediate အဆင့်အတွက် ပြန်ရေးထားတဲ့ ရှိတ်စပီးယားဝထ္ထုတိုတွေ ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ English to Burmese Dictionary အစား English to English Dictionary ကောင်းကောင်းတစ်အုပ် အသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ Move ဆိုတဲ့ စကားလုံး ဆိုပါတော့ အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြတာကို နားလည်လာမဲ့အပြင် move ကို တခြားဘယ်စကားလုံးတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီး သုံးလို့ ရတာတွေကို ဝါကျတွေနဲ့ရှင်းပြထားတော့ အသိတိုးပါတယ်။ အပြောကတော့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့နိုင်ငံမှာ၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အလုပ်လုပ်တော့ အင်္ဂလိပ်စကားကို မဖြစ်မနေပြောရတော့မှပဲ ပြောဖြစ်မှာကိုး။ အမေရိကန်မှာနေတာ ငါးနှစ်လောက်ရှိပြီ၊ မြန်မာပြည်ကဘွဲ့ ရဆိုသူတွေတောင် အင်္ဂလိပ်စကားကို လည်လည်ပတ်ပတ် မပြောတတ်တဲ့သူတွေ တွေ့ ဖူးတယ်။ ကိုယ်သိချင်တာကို မေးမြန်းနိုင်၊ သူတပါး နားလည်သဘောပေါက်အောင် ပြောပြနိုင်ရင်ကို အတော်ဟုတ်နေပါပြီ။ လူမျိုးတိုင်းမှာ မိခင်ဘာသာစကားလေသံရှိတော့ စကားပြောတဲ့အခါ အတတ်နိုင်ဆုံး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေး ပြောဖို့ လိုပါတယ်။ အမေရိကန်ကိုရောက်လို့နေရာတိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စကားကြားရ၊ အင်္ဂလိပ်လို ပြောနေရတာတောင် မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်တော့ အခက်အခဲလေးတွေ ရှိနေမှာပါပဲ။ လေ့လာနေမယ်၊ ဖတ်နေတယ်၊ နားထောင်နေတယ်၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြောဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာတဲ့အခါမှလည်း ဘယ်တော့များမှ အင်္ဂလိပ်လို ကျွှမ်းကျွှမ်းကျင်ကျင် ပြောတတ်နိုင်ပါလိမ့်လို့မတွေးဘဲ တနေ့ ကို နည်းနည်း ဖတ်မယ်၊ မှတ်မယ်၊ လေ့လာမယ်၊ နားထောင်မယ်၊ တကြောင်း၊ နှစ်ကြောင်းလောက် ပြောကြည့်မယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာတယ်ဆိုတာ ခုချက်ချင်း ရေတွင်းတူး ခုချက်ချင်း ရေကြည်သောက်လို့ ရတဲ့ ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တောင်တက်သလို နှေးနှေးနဲ့ မှန်မှန် တောင်ထိပ်ကိုကြည့်ပြီး အဝေးကြီးလို့မတွေးဘဲ၊ တောင်အောက်ကိုကြည့်ပြီး ကြောက်စရာကြီး ငါ တက်မိတာ မှားလေခြင်းလို့မတွေးဘဲ၊ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာကနေ နောက်ထပ်တလှမ်း အဲ့ဒီကနေ နောက်ထပ်တစ်လှမ်း လှမ်းနိုင်ရင် တောင်ထိပ်ကို မလွဲမသေ ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ စိတ်မပျက်ဘဲ စိတ်ရှည်ဇွဲရှိဖို့ တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
PS. I would like to suggest to use the good English to English dictionary. My favorite books are "Colorful Myanmar" and "King Among Men" written by Khin Myo Chit. "Colorful Myanmar" is "a practical and poetic guide for the visitor who wants something better thanatourist view of Burma". "King Among Men" is regarded as her masterpiece,ahistorical novel based on King Anawarath, the 11th century founder of first burmese kingdom with its capital, Bagan. I was so moved by reading her "Her Infinite Variety" and "Come, live with me!" short stories.
မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၅။
ကျနော်လည်း အင်္ဂလိပ်စာ ညံ့တယ် ထိုင်းကိုရောက်တော့လည်းနေ့စဉ်ကြား နေကျဘာသာစကားကပဲနားထဲစွဲနေတော့တာ
ခုတော့၇န်ကုန်ပြန်ရောက်တုန်း အင်္ဂလိပ်စာပြန်လေ့လာဖို့ လုပ်နေတယ်ခင်ဗျး ကျေးဇူးပါ ဒီပို့စ်လေးအတွက်